Bug iyo inosiya iPhone 7 isina sevhisi mushure mekuremadza yendege modhi | IPhone nhau
Apple inoongorora bug inosiya iyo iPhone 7 isina sevhisi mushure mekuremadza iyo ndege ndege
Yakanga yave kutotora. Apple yakaisa iOS 10 inowanikwa kune vanogadzira kutanga kwaJune, asi vagadziri ava havana kukwanisa kuyedza iyo ichangoburitswa system pane iPhone 7 iyo yakatanga kutengeswa munaGunyana 16. Izvozvi, kana vashandisi vekutanga vatove nayo mumaoko avo, paunogona kutanga kuziva kuti iOS 10 inoshanda sei paiyo nyowani smartphone. Zvisingashamisi, yekutanga tsikidzi.
Apple inotoziva dambudziko mune iyo iPhone 7 kana iPhone 7 Plus haigone kubatanidza kune nharembozha mushure mekuremadza iyo ndege nzira. Parizvino, mhinduro yakapihwa nevanhu veCupertino ndeyekutangazve chishandiso asi, kana izvi zvikasashanda, imwe sarudzo ndeyekubvisa SIM kadhi uye kuidzosera panzvimbo. Mhinduro dzakareruka, asi kana dambudziko racho risingazivikanwe, mushandisi anogona kubatwa incommunicado kudzamara vaona kukanganisa uye kutora matanho.
Kutanga inozivikanwa bug yeiyo iPhone 7 uye iOS 10
Muvhidhiyo yapfuura tinogona kuona maviri iPhone, imwe kuruboshwe ma6 uye imwe kurudyi a 7. Zvese zvishandiso zviri munzira yendege, iyi modhi yakadzimwa uye imwe inobatanidzazve kuneti yedata imwe yacho isiri. kugona.
Iye munyori wevhidhiyo anoti akatora yake iPhone 7 kuenda kune Apple Chitoro uye kuti ipapo vakamupa chigaro chitsva, asi kwete vasati vamuudza kuti vanga vatoona matambudziko akafanana kare. Tichifunga kuti kubatana kwakarasika kana kuremadza nzira yendege, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti idambudziko reprojekti, saka mune zvese mukana wekuvandudzwa uchaburitswa munguva pfupi kwete kupfuura. Kana iwe uri kutambura nedambudziko, unogona kugara uchienda kuApple Store kuti utore iyo nyowani iPhone 7, asi iyo nyowani inogona kutambura iyo imwechete bug. Zvimwe chinhu chakanakisa kuve nemoyo murefu uye kumirira iOS 10.0.2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Apple inoongorora bug inosiya iyo iPhone 7 isina sevhisi mushure mekuremadza iyo ndege ndege
ndiyo nyowani #bugate hahaha
1. Vhidhiyo yacho ndeye yakasarudzika mhando uye zviratidzo zvemasaini, nezvimwe hapana kwazvinoonekwa.
2. Pane imwe nhare, isa iyo ndege nzira uye pane imwe inoita bluetooh ??? WTF !!!
FAKE kusvikira mabhawa ...
Google inoda kuronga nzendo dzako neayo Google Trips app
Iko hakuna kupokana: Iyo kamera uye Kumba bhatani reiyo iPhone 7 yakagadzirwa nesafiri